एक समूहको धारिलो हतियार प्रहारले राजविराजका २१ वर्षीय प्रेम यादवको मृत्यु | INRA ONLINE MEDIA
October 11, 2018 KR NEWS
राजविराज : एक समूहको धारिलो हतियार प्रहारले राजविराज–१ डुमरी शिवथानका २१ वर्षीय प्रेम यादवको मृत्यु भएको छ ।
२० भन्दा बढी युवाको समूहले हतियार प्रहार गरी भागेपछि घाइते यादवको उपचारको क्रममा बिहीबार बिहान मृत्यु भएको हो । गत मंगलबार बिहान राजविराज–२ स्थित पीस जोन बोर्डिङ्ग स्कुल अगाडि बाटोमा यादवलाई घेरा हाली राजविराज–११ फर्सेठका युवाको समूहले आक्रमण गरेका थिए ।
घाइते यादवको बिराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको मृतकका परिवारका सदस्यले बताए । यादवको शवको पोष्टमार्टम विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा भएको छ । हत्यामा संलग्न सबै फरार भए पनि उनीहरुको पहिचान खुलिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डिएसपी भावेश रिमालले बताए ।
डिएसपी रिमालले पुरानो रिसइवीका कारण हत्या गरिएको खुल्न आएको बताए । यादवको मृत्युपछि प्रहरीले आरोपितहरुको खोजी कार्य तिब्र पारेको बताएको छ । यस क्रममा अनुसन्धानका लागि एक युवकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । पोष्टमार्टमपछि स्थानीयवासीले राजविराजमा मृतकको शवसहित नगर परिक्रमा गर्दै हत्यारालाई पक्राउ गरी कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार स्थानीयले दिनभर नाराजुलुस गरी कारवाहीकाे माग गरेका हुन् ।
सुन्दरी पुलमा बाइक दुर्घटना हुदा राईको मृत्यु
के तपाईलाई थाहा छ ? हाम्रै कंचनपुर सप्तरीमा मनोकामना होटल एण्ड लज छ नि !!
आइतबार मालबाहक ट्रक रुखमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु
सेल्फी खिच्ने क्रममा तामाकोसी नदीमा खस्दा युवतीको मृत्यु
Categories: प्रदेश-2, राजविराज
सप्तरीमा बलात्कार र यौनजन्य अपराधविरुद्ध जवाफदेहिता अभियान आरम्भ
विश्व दृष्टि दिवसको अवसरमा कञ्चनरुपमा आँखा तथा कान उपचार केन्द्रको उद्घाटन